Isizathu Esilula Kungani I-Google Ikwazi Ukuma Indawo Yakho - Phendula ngo-Expert Semalt
Uma ukholwa ukuthi ukugxila igama elingukhiye kubalulekile ku-SEO, wenza iphutha elikhulu! Ukugxila igama elingukhiye igama elichaza ukuthi usebenzisa amagama amaningi ngaphandle kokunaka ikhwalithi. Ngamanye amazwi, singasho ukuthi kuhilela ukusebenzisa imisho eminingi namagama angenangqondo ku-athikili futhi inhloso yabaphathi bewebhu ukuletha ithrafikhi engaphezulu, ukuthuthukisa injini yokusesha isayithi lamasayithi abo. Ngeshwa, ukugxilongwa kwegama eliyisihluthulelo kuholela ku-Google ukubeka izinhlawulo kuwebhusayithi yakho.
Nokho, u-Igor Gamanenko, i-12 (Semalt iMenenja yeNtuthuko yePhasimende, uthi kungenzeka ukugwema lesi sinxephezelo ngokunamathela kumuntu ophelele wegama elingukhiye. Akufanele usebenzise amagama amaningi nemishwana njengoba izobekwa njengogaxekile yizinjini zokusesha. Futhi, akufanele ukhohlwe ukuthi i-Google ayithathi igama elingukhiye ukugxila kancane - buy real passports online. Eqinisweni, seliqalise amasu ambalwa ukuqinisekisa ukuthi zonke izihloko zilotshwe ngokugeleza okulungile, ulimi, futhi akukho ukugxila kwamagama angukhiye. Lapha sizokutshela indlela yokugwema ukugxila igama elingukhiye nokugcina ikhwalithi yokuqukethwe kwakho ngezinga elihle.
Kuyini ukufakwa kwegama elingukhiye?
Ngaphambi kokuba sixoxe nganoma yini enye, ake ngikutshele ukuthi ukugxilongwa kwegama eliyisihluthulelo ukusetshenziswa okungalungile kwamagama angukhiye nemishwana kokuqukethwe kwakho..Qinisekisa ukuthi izihloko zakho zibhalwa kahle futhi zihambisana nesibalo esincane semagama ngenhloso ye-SEO. Kumele futhi uqonde imibono eyisisekelo yokugxila igama elingukhiye. Uma isazi se-SEO sisebenza, uzama ukufaka amagama angukhiye ukuthuthukisa isimo sewebhusayithi yakho. Ngempela, amasu afana nalokhu angase alethe okuqukethwe kwakho phezulu, kodwa imiphumela ayisoze yahlala njalo.
Uma isayithi lakho lifika kumakhasi okuqala we-Google, injini yokusesha izohlola ikhwalithi yayo futhi ingayiphonsa uma uyifakile ngamagama angukhiye. Yingakho ungalokothi uqashe uchwepheshe we-SEO owenza kahle ukubhala izihloko ezingenangqondo futhi ukhokhela ukunakekelwa kwegama elingukhiye kunekhwalithi.
Ngokusho kwe-Wikipedia, i-Google ibheka igama elingukhiye eligxilile njengomkhuba wokungathembeki. Ngakho-ke, kubalulekile kubalobi be-freelance kanye nabathengi bokuqukethwe ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yezinto ezibhalwe phansi. Kufanele bagcine amagama angukhiye okungenani futhi bazame ukunikeza abasebenzisi ngolwazi oluwusizo oluthe xaxa.
Amagama angukhiye angukhiye angamaphesenti:
Uma udidekile mayelana nephesenti lokugxila igama elingukhiye, ake ngikutshele ukuthi amanye amagama angukhiye oyisebenzisayo ku-athikili kufanele afane nemigomo nemigomo ye-Google. Ngokuvamile, i-SEOs sincoma ukuthi ukubaluleka kwegama elingukhiye akufanele kube ngamaphesenti angaphezu kwamabili futhi amagama angukhiye angcono angagcizelela ezihlokweni zakho. Ungabala ukubaluleka kwegama elingukhiye ngamathuluzi amaningi. Sikukwazisa ukuthi ungasebenzisi igama elilodwa elingukhiye izikhathi ezingaphezu kwezingama-2 ku-athikili angu-300. Ungakwazi ukwandisa amagama okubalwa bese ufaka igama elifanayo eliyisihluthulelo kusuka izikhathi ezine kuya kwezihlanu, kodwa lowo ngumkhawulo ophezulu.
i-Moz.com yindawo ehloniphekile ye-SEO, okunikeza izixazululo kuzo zonke izinkinga zakho ezihlobene ne-SEO. Ungakha i-akhawunti kule sayithi bese ubuza imibuzo. Ungase futhi uzuze okubhaliselwe kwayo futhi ulande ama-plugin angase avumelane nesayithi lakho kakhulu.